လုပျပှဲကစားလို့ Pushka League ဆကျပွိုငျခှငျ့ပိတျပငျခံခဲ့ရတဲ့ Dota2အသငျး CyberTRAKTOR – Gaming Noodle
လုပျပှဲကစားလို့ Pushka League ဆကျပွိုငျခှငျ့ပိတျပငျခံခဲ့ရတဲ့ Dota2အသငျး CyberTRAKTOR
ယူကရိနျးအခွစေိုကျ Esports ပွိုငျပှဲကငျြးပရေးအဖှဲ့အစညျးကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ WePlay! ဟာ CIS ဒသေရဲ့ Dota2အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ CyberTRAKTOR ကို Pushka League Division2ပွိုငျပှဲအတှငျး ဆကျလကျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ မပွုတော့ပဲ ရှဆေို့ငျးပိတျပငျလိုကျပါတယျ။ CyberTRAKTOR အသငျးဟာ ယငျးပွိုငျပှဲအတှငျးမှာ လုပျပှဲကစားခဲ့ကွောငျး WePlay! က ယူဆတဲ့အတှကျ ယခုလိုပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဧပွီလ ၂၆ ရကျနကေ့ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ကွတဲ့ WePlay! Pushka League Divison2ရဲ့ BO3 ပှဲစဉျမြားမှာ CyberTRAKTOR အသငျးဟာ ပွိုငျဘကျအသငျး Cyber Legacy ကို ၂ ပှဲပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ ယငျးပှဲစဉျမြားအပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ CyberTRAKTOR အသငျးဟာ ပွိုငျပှဲကို လောငျးကစား ပွုလုပျထားပွီး တမငျအရှုံးခံသှားလားဆိုတာ သံသယရှိနကွေောငျး WePlay! က ထုတျပွနျ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
ယငျးကွညောခကျြအတှငျးမှာပဲ WePlay! ဟာ CyberTRAKTOR ကို ပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့ ရှဆေို့ငျးပိတျပငျကွောငျး ကွညောခဲ့တာပါ။ WePlay! Pushka League ရဲ့ Esports ဌာနမှ ပုဂ်ဂိုလျမြားနဲ့ ပှဲသုံးသပျသူမြားဟာ CyberTRAKTOR တို့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ၂ ပှဲကို အသအေခြာသုံးသပျခဲ့ကွောငျး၊ CyberTRAKTOR တို့ဟာ လောငျးကစား ပွုလုပျခဲ့တဲ့အတှကျ တမငျသကျသကျအရှုံးခံခဲ့တာဖွဈဖို့ သခြောသလောကျရှိကွောငျး၊ စုံစမျးမှုမြား ဆကျလကျပွုလုပျနပွေီး သကျသအေထောကျအထားမြား ဆကျလကျရှာဖှနေကွေောငျး အစရှိသဖွငျ့လညျး ယငျးကွညောခကျြအတှငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
WePlay! ဟာ Pushka League ကို Division ၂ ခုနဲ့ ပွုလုပျကငျြးပနတောဖွဈပါတယျ။ Division 1 မှာ OG, Nigma, Team Secret နဲ့ Team Liquid တို့လို ထိပျတနျးအသငျးကွီးမြား ယှဉျပွိုငျနကွေတာဖွဈပွီး Division2မှာတော့ လူသိနညျးသေးတဲ့ အသငျးငယျမြား ပါဝငျယှဉျပွိုငျနကွေပါတယျ။
Division2ဟာ ထူးခြှနျတဲ့ကစားသမားသဈမြားကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ရညျရှယျထားတဲ့ပှဲစဉျမြားဖွဈကွောငျး WePlay! ရဲ့ Esports မနျနဂြောဖွဈသူ Nexius က ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီပှဲစဉျမြားအတှငျးမှာ ကစားသမားမြားဟာ မိမိတို့ကိုယျကို မွှငျ့တငျပွီး တိုးတကျအောငျ ပွုလုပျကွစလေိုကွောငျး၊ လုပျပှဲကစားတာကတော့ မဖွဈသငျ့တဲ့ကိစ်စဖွဈပွီး ပါဝငျသူမြားကို ကြိနျးသအေပွဈပေးရမှာဖွဈကွောငျး အစရှိသဖွငျ့လညျး Nexius က ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ နာမညျကြျော ယူကရိနျး caster တဈဦးဖွဈသူ V1lat က သူ့ရဲ့ သုံးသပျခကျြမြားကို အှနျလိုငျးပျေါမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ V1lat ရဲ့ သုံးသပျခကျြမြားအတှငျးမှာတော့ CyberTRAKTOR တို့ဟာ ၂ ပှဲလုံးမှာ လုပျပှဲကစားခဲ့တာထငျရှားကွောငျး၊ Esports လောငျးကစားဒိုငျကွီးမြားကိုလညျး ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပွီး ယငျးပှဲမြားအတှကျ လောငျးကွေးမြားစှာ တငျထားခဲ့တာကို တှရှေိ့ရကွောငျး၊ CyberTRAKTOR အသငျးသားမြားဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ လစာမရကွတာကိုလညျး စုံစမျးသိရှိထားကွောငျး အစရှိသဖွငျ့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
CyberTRAKTOR တို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ အသငျးအတှငျးမှာ စုံစမျးစဈဆေးမှုမြားကို ကိုယျတိုငျပွုလုပျပွီး ဒီကိစ်စအကွောငျး အမြားသိအောငျ ပွနျလညျရှငျးပွဖို့ကိုလညျး WePlay! က တိုကျတှနျးထားခဲ့ပါသေးတယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျ ပေးလကျြ ရှိပါတယျ။
source: weplay.tv, vpgame, dotesports
လုပ်ပွဲကစားလို့ Pushka League ဆက်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ Dota2အသင်း CyberTRAKTOR
ယူကရိန်းအခြေစိုက် Esports ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WePlay! ဟာ CIS ဒေသရဲ့ Dota2အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ CyberTRAKTOR ကို Pushka League Division2ပြိုင်ပွဲအတွင်း ဆက်လက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မပြုတော့ပဲ ရွှေ့ဆိုင်းပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ CyberTRAKTOR အသင်းဟာ ယင်းပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ လုပ်ပွဲကစားခဲ့ကြောင်း WePlay! က ယူဆတဲ့အတွက် ယခုလိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ WePlay! Pushka League Divison2ရဲ့ BO3 ပွဲစဉ်များမှာ CyberTRAKTOR အသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်း Cyber Legacy ကို ၂ ပွဲပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းပွဲစဉ်များအပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ CyberTRAKTOR အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲကို လောင်းကစား ပြုလုပ်ထားပြီး တမင်အရှုံးခံသွားလားဆိုတာ သံသယရှိနေကြောင်း WePlay! က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ယင်းကြေညာချက်အတွင်းမှာပဲ WePlay! ဟာ CyberTRAKTOR ကို ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် ရွှေ့ဆိုင်းပိတ်ပင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့တာပါ။ WePlay! Pushka League ရဲ့ Esports ဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ပွဲသုံးသပ်သူများဟာ CyberTRAKTOR တို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ၂ ပွဲကို အသေအချာသုံးသပ်ခဲ့ကြောင်း၊ CyberTRAKTOR တို့ဟာ လောင်းကစား ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် တမင်သက်သက်အရှုံးခံခဲ့တာဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိကြောင်း၊ စုံစမ်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီး သက်သေအထောက်အထားများ ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်း အစရှိသဖြင့်လည်း ယင်းကြေညာချက်အတွင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
WePlay! ဟာ Pushka League ကို Division ၂ ခုနဲ့ ပြုလုပ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Division 1 မှာ OG, Nigma, Team Secret နဲ့ Team Liquid တို့လို ထိပ်တန်းအသင်းကြီးများ ယှဉ်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီး Division2မှာတော့ လူသိနည်းသေးတဲ့ အသင်းငယ်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြပါတယ်။
Division2ဟာ ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားသစ်များကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်များဖြစ်ကြောင်း WePlay! ရဲ့ Esports မန်နေဂျာဖြစ်သူ Nexius က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်များအတွင်းမှာ ကစားသမားများဟာ မိမိတို့ကိုယ်ကို မြှင့်တင်ပြီး တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ကြစေလိုကြောင်း၊ လုပ်ပွဲကစားတာကတော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး ပါဝင်သူများကို ကျိန်းသေအပြစ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့်လည်း Nexius က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ နာမည်ကျော် ယူကရိန်း caster တစ်ဦးဖြစ်သူ V1lat က သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်များကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ V1lat ရဲ့ သုံးသပ်ချက်များအတွင်းမှာတော့ CyberTRAKTOR တို့ဟာ ၂ ပွဲလုံးမှာ လုပ်ပွဲကစားခဲ့တာထင်ရှားကြောင်း၊ Esports လောင်းကစားဒိုင်ကြီးများကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပြီး ယင်းပွဲများအတွက် လောင်းကြေးများစွာ တင်ထားခဲ့တာကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ CyberTRAKTOR အသင်းသားများဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ လစာမရကြတာကိုလည်း စုံစမ်းသိရှိထားကြောင်း အစရှိသဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
CyberTRAKTOR တို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ အသင်းအတွင်းမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီး ဒီကိစ္စအကြောင်း အများသိအောင် ပြန်လည်ရှင်းပြဖို့ကိုလည်း WePlay! က တိုက်တွန်းထားခဲ့ပါသေးတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက် ပေးလျက် ရှိပါတယ်။